MM Cinema - Movies Info on Windows PC Download Free - 1.15 - com.bit.mmcinema
Home / Entertainment Apps / MM Cinema - Movies Info on Windows Pc
MM Cinema - Movies Info on Windows Pc
Rating: 4,5/5 - 422 votes
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရုံတင်ပြသနေသော ရုပ်ရှင်ကားများ၏ အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် MM Cinema Mobile App ကို အခုပဲ... [read more]
On this page you can download MM Cinema - Movies Info and install on Windows PC. MM Cinema - Movies Info is free Entertainment app, developed by Bagan Innovation Technology. Latest version of MM Cinema - Movies Info is 1.15, was released on 2019-02-09 (updated on 2020-10-04). Estimated number of the downloads is more than 100000. Overall rating of MM Cinema - Movies Info is 4,5. Generally most of the top apps on Android Store have rating of 4+. This app had been rated by 422 users, 37 users had rated it 5*, 346 users had rated it 1*. Older versions of MM Cinema - Movies Info are also available with us 1.15 1.12 unspecified 1.9 1.7.1 1.7 1.6 1.2 1.1
How to install MM Cinema - Movies Info on Windows?
Instruction on how to install MM Cinema - Movies Info on Windows XP/7/8/10 Pc & Laptop
In this post, I am going to show you how to install MM Cinema - Movies Info on Windows PC by using Android App Player such as BlueStacks, Nox, KOPlayer, ...
Step By Step Guide To Install MM Cinema - Movies Info using BlueStacks
How to install MM Cinema - Movies Info on Windows PC using NoxPlayer
Download MM Cinema - Movies Info 1.15 on Windows PC – 13 MB
Download MM Cinema - Movies Info 1.12 on Windows PC – 13 MB
Download MM Cinema - Movies Info unspecified on Windows PC – 13 MB
Download MM Cinema - Movies Info 1.9 on Windows PC – 10.7 MB
Download MM Cinema - Movies Info 1.7.1 on Windows PC – 10.6 MB
Download MM Cinema - Movies Info 1.7 on Windows PC – 10.6 MB
Download MM Cinema - Movies Info 1.6 on Windows PC – 8 MB
Download MM Cinema - Movies Info 1.2 on Windows PC – 7.9 MB
Download MM Cinema - Movies Info 1.1 on Windows PC – 7.9 MB
- Location of Cinema Info added
- Nearby Cinema Feature
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရုံတင်ပြသနေသော ရုပ်ရှင်ကားများ၏ အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် MM Cinema Mobile App ကို အခုပဲ သွင်းလိုက်ပါ။
MM Cinema တွင်
- ရုပ်ရှင်ကားများ၏ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသား၊ မင်းသမီးများ၊ ဒါရိုက်တာများ ၏အချက်အလက်များ စုံလင်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
- ရုပ်ရှင်ကားများ၏ Movie Trailer (ဇာတ်လမ်း အညွှန်း Video) ကိုလည်း App ထဲတွင်ပင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
- လက်ရှိ ရုံတင်ပြသနေသော မြန်မာ ရုပ်ရှင်ကား (Myanmar Movie/Yote Shin)၊ နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်ကား (International Movie/Yote Shin) နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ အားလုံးကို ရုပ်ရှင် အချိန်များနှင့်တကွ တိကျစွာ တစ်နေရာတည်းတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
- နောက်ထပ် ရုံတင်မည့် ဇာတ်ကားအသစ်များအကြောင်းကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။
- Movie Trailer များကို နောက်ဆုံးထွက် Movie Trailer များကိုသာ ရွေးချယ် တင်ပေးထားပါသည်။
- ရုပ်ရှင် ရုံများ၏ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားပါသည်။
- ရန်ကုန် မြို့ရှိ ရုံများသာလက်ရှိပါဝင်ပြီး မကြာမီ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် နှင့် အခြား မြို့ကြီးများ၏ ရုပ်ရှင်ရုံ အချက်အလက်များ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
- သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ရုံမတင်သေးသော ဇာတ်လမ်းများကို favorite ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီး ရုံတင်သောအခါ Notification ဖြင့် အသိပေးခြင်း များပါရှိသည်။
အသုံးပြုခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ကြယ်ငါးပွင့် ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။ www.mm-cinema.com တွင်လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Install MM Cinema app to get info of updated Movies on Cinemas acorss Myanmar.
MM Cinema includes
-	Brief info of the Movie (or Yote Shin), actors and actresses, directors
-	In-app Movie Trailer (or Yote Shin Trailer)
-	Myanmar Movies (or Myanmar Yote Shin), International Movies (or International Yote Shin) on Cinemas with the showing times and dates
-	Complete info on upcoming Movies (or Coming Soon Yote Shin)
-	Latest Movie Trailers of each Movie (or Latest Yote Shin Trailer)
-	Address and contact numbers of Cinemas
-	Yangon data only and will update Mandalay, NayPyiTaw and other cities soon
-	Favorite function to get notification when the upcoming movies are showing on Cinema
If you like our app, please rate us Five Star. Special Thanks in advance. You can also browse www.mm-cinema.com which is our official website.